၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး (ကြွက်နှစ်) အတွက်ဆုတောင်းစကားများ - YOYARLAY Digital Media and News
၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး (ကြွက်နှစ်) ပွဲတော်အခါမှာ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကို ဆုတောင်းပေးနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းစကားလေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ့ဆိုရင်ကော ဘယ်ဆုတောင်းကို လိုချင်လဲ ပြောပြခဲ့လို့ ရပါတယ်။ အားလုံးပဲ သာယာကြည်နူးစရာ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေ..။
3. 新年快乐(xīn nián kuài lè)
24. 马到成功 ( Mǎ dào chéng gōng)
25.一帆风顺 (Yīfān fēngshùn)
26. 阖家幸福 (Héjiā xìngfú)
Previous Previous post: ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိအိမ်တစ်လုံးကို လေယာဉ်ဝင်တိုက်မိပြီး ငါးဦးသေဆုံး
Next Next post: ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲခံရသူ ၁၇၉ ဦးအထိရှိလာ